China NANO Glass Glass ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Montary
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ CE / SGS / စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ
Nano ဖန်ကျောက်သည်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်ကြမ်းသည်အဓိကသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်အားဖြင့်အရည်ပျော်သည်။ ကျောက်တုံးများထဲသို့ဖိချပြီးမည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆိုဖြတ်နိုင်သည်။ ကြမ်းခင်း၊ အတွင်းနံရံ၊ အပြင်နံရံများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ countertop, vanity top စသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။
1.product အမည်: nano ဖန်ကျောက်
2.brand အမည်: montary
မူရင်း 4.place: တရုတ်
5.color တည်ငြိမ်သည်၊ 100,000m2 သည်တူညီသောအရောင်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်
6.surface finish: ပွတ် finish ကို, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားအရသိရသည်
၇။ လျှောက်လွှာများ - နံရံမျက်နှာပြင်၊ ကြမ်းပြင်၊ ခြေလှမ်း၊ ကောင်တာစသည်တို့
8.supply စွမ်းရည်: 60,000m2 / တစ်လ
၉။ အပ်နှံချိန် - အတွင်း
အမိန့်ပြီးနောက် 10 ရက် 10.dimension အတည်ပြုခဲ့သည်:
panel အရွယ်အစား -
2460 × 1640/1540/1440/1340/1240mm 2660 × 1640/1540/1440/1340 / 1240mm
အထူ: 12mm, 18mm, 20mm, 30mm
ပြား 0.5% (အများဆုံး)
အထူ +/- 1mm
မစင်ကြယ် အမြင်အာရုံစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် undistinctness 1m အကွာအဝေး
အခြောက်နှင့် compression အစွမ်းသတ္တိ ၇၀.၉MPA (မိနစ်)
ရေစုပ်ယူ သုည ၀
ကွေးခွန်အား ၄၃.၅Mpa (မိနစ်)
အသံအတိုးအကျယ်သိပ်သည်းဆ 2.55G / CM3
အက်ဆစ်အစာရှောင်ခြင်း K: 0,13%, နှစ်တွင်အခါအသွင်အပြင်မျှပြောင်းလဲမှု650 နာရီများအတွက် 1.0% vitriol ၌တည်၏
alkali ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် ငွေကျပ်: ၀.၈၈%၊၁.၀% ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်သည် ၆၅၀ နာရီဖြစ်သည်
nano ဖန်ခွက်ကျောက်လွှာထိပ်မျက်နှာပြင်၏ခြစ်ရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် 2.how?
A. အကယ်၍ nano ဖန်ကျောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခြစ်ရာသည်ရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်ပါက:
အဆင့် 1အသုံးပြုသောပွန်းစားစက္ကူ (ကွက်နံပါတ် 220) နှင့်အတူအရောင်တင်, မည်သည့်အမှတ်အသားသည်အထိအရောင်တင်
အဆင့် ၂ ။အသုံးပြုသောပွန်းပဲ့စက္ကူ (ကွက်နံပါတ် ၄၀၀) ဖြင့်ဆေးကြောခြင်း
အဆင့်3။သိုးမွှေးပစ် (အချင်း ၂၂၀ မီလီမီတာ) + ဖန်ချောမှုန့်ဖြင့်အရောင်တင်သည်
B. nano ဖန်ကျောက်မျက်နှာပြင်တွင်ခြစ်ရာသည်နက်သည်
အဆင့် 1ပွန်းပဲ့သော disc ကို (ကွက်နံပါတ် 300) + ရေနှင့်အတူပွတ်
အဆင့် ၂ ။ပွန်းစားခြင်း disc ကို (ကွက်နံပါတ် 500) + ရေနှင့်အတူချော
အဆင့်3။အသုံးပြုသောပွန်းစားစက္ကူ (ကွက်နံပါတ် 220) နှင့်အတူအရောင်တင်, မည်သည့်အမှတ်အသားသည်အထိအရောင်တင်
အဆင့် 4. ပွန်းပဲ့စက္ကူ (ကွက်နံပါတ် 400) ဖြင့်ပိုလန်
အဆင့်5။သိုးမွှေးပစ် (အချင်း ၂၂၀ မီလီမီတာ) + ဖန်ချောမှုန့်ဖြင့်အရောင်တင်သည်
လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ ရေခဲမုန့်၊ NaOH.KHCO3 ရေစိုသော alkalic အရည်
အညစ်အကြေးများ၊ မင်၊ သံချေး၊ ပြာများကြမ်းတမ်းသော HCL.HNO3.H2SO4 ရေဆိုးအက်စစ်အရည်၊ မင်အတွက်အကောင်းဆုံး oxalic acid
အချဉ်, ဖယောင်း, ကာဗွန်အမှုန့်အက်ဆစ်သို့မဟုတ် alkalic အရည်
ကြဲကြဲ linseed ဆီ
1.cut nano ဖန်ကျောက်ဖြင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်တံတားဖြတ်စက်ကို အသုံးပြု၍ အထူးလွှဓါးသွားလိုအပ်သည်
Nano ဖန်ကျောက်၊ အနိမ့်အမြင့်သည် 0.5-0.6meter / မိနစ်ဖြစ်သည်
nano ဖန်ခွက်ကိုရေဂျက်သုံးစက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဖြတ်သည်မှာ ၀.၂ မီတာ / တစ်မိနစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေဂျက်စက်ကို အသုံးပြု၍ စားပွဲခုံ (သို့) အချည်းနှီးသောအပေါက်သို့မဟုတ်ကွေးကိုဖြတ်ရန်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။
နောက်တစ်ခု: Quartz ကျောက်ခဲ
အနက်ရောင် Nanoglass ကျောက်
Nano Glass ကိုကျောက် Arc Panel ကို
Nano Glass ကိုကျောက်ခေတ်ကော်လံ
Nano Glass ကိုကျောက်ပြား
Nano Glass Stone ထိပ်
စူပါ Nano Glass ကိုအတုကျောက်ခဲ